किन बन्द हुदै छ भोलीदेखि शिवम सिमेन्ट आईपीओ निष्कासन ? - किन बन्द हुदै छ भोलीदेखि शिवम सिमेन्ट आईपीओ निष्कासन ?
किन बन्द हुदै छ भोलीदेखि शिवम सिमेन्ट आईपीओ निष्कासन ?
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १३ फाल्गुन, 06:46:07 PM
काठमाडौं । माग भन्दा बढी आवेदन परेपछि शिवम सिमेन्ट लिमिटेडको साधारण सेयर ‘आईपीओ’ निष्कासन मंगलबारदेखि बन्द हुने भएको छ ।
उद्योगले ४४ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्दा सर्वसाधारण र स्थानीयबासिन्दाले गरी ४६ हजार ४६ जनाले ४६ लाख ८८ हजार १२० कित्ताका लागि आवेदन दिएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका मर्चेन्ट बैंकर प्रमुख सुजनबाबु अधिकारीले बताए ।
यस्तै स्थानीयबासिन्दाबाट ३ लाख ६८ हजार ५८० कित्ताका लागि आवेदन परेको उनले जानकारी दिए । उद्योगले प्रिमियम मूल्यमा उद्योग सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ३०० र उद्योग प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँ प्रिमियम मूल्यमा ४४ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।
साधारण शेयर निष्काशन गरी बाँडफाँड गरे पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
२०७५, १३ फाल्गुन, 06:46:07 PM
आर्थिक अवस्था तन्नम भएका कम्पनी पूँजीबजारमा : नौ करोडको आईपीओ, हकप्रदको भारी !
कमजोर ग्रेडिङ्ग पाएको आँखुखोला हाइड्रोमा लगानीकर्ताको चासो !